इमेलबाट पुलिस रिपोर्टः १० नम्बर डायरीको भर - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
इमेलबाट पुलिस रिपोर्टः १० नम्बर डायरीको भर
दीपक खरेल काठमाडौं कार्तिक २७
नेपाल प्रहरीको चालचलन शाखामा अहिले प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा एउटा टोली दैनिक आउने इमेल चेकजाँचमा व्यस्त भेटिन्छ। प्रहरी सहायक निरीक्षकको जिम्मेवारी छ– विदेशबाट आउने इमेल हेर्ने, त्यसमा आएका कागजपत्र चेकजाँच गर्ने र नियमसम्मत भए प्रेषकलाई प्रहरी रिपोर्ट इमेलबाटै पठाउने।
प्रहरीको इमेल ठेगाना policereport@nepalpolice.gov.np मा इमेल पठाएर कार्तिक १ देखि २६ गतेसम्म १४२ पुरुष र १०७ महिलासहित २४९ जनाले चारित्रिक प्रमाणपत्र माग गरेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय चालचलन शाखाले आवश्यक कागजपत्र र रेर्कड हेरेर उनीहरुलाई प्रमाणपत्र पठाउने गरेको छ।
नेपाल प्रहरीमा यो एकदमै नयाँ प्रयोग हो, जुन सफल भइरहेको छ र विदेशमा बस्ने सर्वसाधारणले यसबाट लाभ लिइरहेका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीका लागि आवश्यक रिपोर्ट प्रहरीले वैशाखदेखि इमेलमार्फत पठाइदिन थालेको हो। सेवा सुरु गरेको महिना ८९ जनाले निवेदन दिएका थिए। त्यसयता सोमबारसम्म ९५६ पुरुष र ६२३ महिला गरी एक हजार १५७९ जनाले इमेलबाट प्रहरीले उपलब्ध गराउने चारित्रिक प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्।
कसरी दिइन्छ पुलिस रिपोर्ट?
प्रहरीले निवेदनसहित राहदानीको पृष्ठ २, ३ तथा ३१ को प्रतिलिपी, अन्तिम पटक नेपाल छोड्दाको नेपाल अध्यागमनको डिपार्चर स्ट्याम्प स्पष्ट भएको पृष्ठ, नागरिकताको प्रतिलिपी र २ सय किलो बाइटसम्मको पासपोर्ट साइजको रंगीन फोटो इमेलमा पाएपछि त्यसमाथि अध्ययन गर्छ। प्रहरीले विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रतिलिपी अनिवार्य गरेको छ।
प्रहरीले प्राप्त गरेको इमेलका आधारमा क्रिमिनल रेर्कड सिस्टम (सिआरएस) हेरेर चारित्रिक प्रमाणपत्र बन्छ। प्रहरीले सोही प्रमाणपत्रको पिडिएफ फरम्याट बनाएर इमेलबाटै पठाउँछ।
अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख अतिरीक्त महानिरीक्षक पुष्कर कार्कीले यसरी पठाउने डिजिटल कपी केही देशमा अमान्य भएकाले त्यसको समाधानका लागि काम भइरहेको बताए। उनका अनुसार प्रहरीले डिजिटल फरम्याटमा बारकोड वा क्युआर कोड राखेर चारित्रिक प्रमाणपत्रको आधिकारिकता पुष्टिका लागि काम गरिरहेको छ।
‘कुनै देशमा लिखित कपि नै चाहिने प्रावधान रहेछ, हामी ती देशका हकमा आवश्यकता अनुसारको प्रक्रिया पुरा गर्ने तयारीमा छौं,’ एआइजी कार्कीले नेपालखबरसँग भने।
विभागले सूचना प्रविधि निर्देशनालयसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको छ। प्रहरीका लागि निर्देशनालयले बनाएका सिआरएस, अटोमेटेड फिङगरप्रिन्ट आइडेन्टिफिकेशन सिष्टम (एएफआइएस) र क्यारेक्टर भेरिफिकेसन इन्फरमेशन सिष्टम (सिभिआइएस) सफ्टवेयरले पूर्ण विवरण, औंठा छाप र अक्षरहरुका आधारमा आपराधिक तथ्यांक भए नभएको पत्ता लगाउँछ।
के हो प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र?
नेपाली तथा विदेशी नागरिकलाई नेपालमा कुनै आपराधिक गतिविधीमा संलग्न नरहेको भन्दै प्रहरीले दिने प्रमाणपत्र चारित्रिक प्रमाणपत्र हो। प्रहरीले देशभर मुद्दा चल्ने इकाईहरुमा रहने १० नम्बर डायरीमा जनिएका व्यक्तिहरुको विवरण तिनपुस्ते सहित ठेगाना खुलाएर राख्छ। सोही तथ्यांक प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागमा रहेको सेन्ट्रल क्रिमिनल रेर्कडमा दर्ता गरिन्छ।
प्रहरीले चारित्रिक प्रमाण उपलब्ध गराउँदा व्यक्तिको नाम, बाबुको नाम, ठेगाना र भएसम्म नागरिकता प्राप्त गरेको स्थान र नम्बरबाट समेत जाँच गर्दछ। यसरी कुनै व्यक्तिले विगतमा १० नम्बर डायरीमा जनिने गरि अपराध गरेको भए उसलाई कैफियत जनाएर चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने गरिन्छ।
संख्यामा बढोत्तरी, भिडमा कमी
महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी बाहिर युवाको भिड देखेपछि धेरैको मुखबाट निस्कन्थ्यो ‘इपिएस खुलेछ’। सरकारले नै दक्षिण कोरिया कामदार पठाउने प्रक्रिया इपिएस अहिलेपनि वर्षेनी हुन्छ। तर रानीपोखरीमा पहिले जस्तो युवाको लाम देखिँदैन्।
रोजगार र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने नेपाली तथा विदेश यात्राका लागि प्रवेशाज्ञा लिन पुलिस रिपोर्ट आवश्यक पर्छ। स्वदेशकै ठूला रोजगारदाताले पनि प्रहरीले उपलब्ध गराउने चारित्रिक प्रमाणपत्र माग गर्दै आएपनि अहिले रानीपोखरी बाहिर भीड देखिँदैन। प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग मातहत रहने चारित्रिक शाखाले बढ्दो मागसँगै चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने काउन्टर वृद्धी गरेको प्रभाव अहिले देशभर देखिएको छ।
नेपाल प्रहरीले चारित्रिक प्रमाण पत्रका लागि आवश्यक निवेदन प्रहरी प्रधान कार्यालय चालचलन शाखा वा रानीपोखरी, महाराजगञ्ज, भक्तपुर, ललितपुर, बिराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, पोखरा प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्र्तगत संघीय प्रहरी ईकाई कार्यालय, लुम्बिनी, प्रदेश ५ प्रहरी कार्यालय अन्र्तगत संघीय प्रहरी ईकाई कार्यालय, नेपालगञ्ज र प्रदेश ७ प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत संघिय प्रहरी ईकाई कार्यालय, धनगढी उपशाखाहरूबाट चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँदै आएको हो।
प्रकाशित २७ कार्तिक २०७५, मंगलबार | 2018-11-13 17:26:30